Tartan Kubadda Cagta oo lagu Maamusayay Wasiirrada cusub ee maamulka Jubba oo ka furmay Magaalada Kismaayo |
Tartan Kubadda Cagta oo lagu Maamusayay Wasiirrada cusub ee maamulka Jubba oo ka furmay Magaalada Kismaayo
Khamiis, December 12, 2013 :- Waxaa maanta si toos ah u furmay Tartan ciyaareed ay ku baratamayaan shanta xaafadood ee magaalada Kismaayo, kaasoo lagu maamuusayo golaha cusub ee wasiirada maamulka Jubba ee dhawaan lagu dhawaaqay.
Ciyaartan oo ay kasoo qeybgaleen masuuliyiin ka tirsan maamulka Jubba oo ay kamid yihiin Wasiirka arimaha gudaha iyo amniga, Max’ed Faarax Warsame (Darwiish), afhayeenka maamulka Jubba, C/naasir Seeraar Maax, gudoomiyaha degmada Kismaayo C/laahi Qaldaan, madaxa xiriirka kubadda cagta ee gobolka iyo dadweeyne aad u tiro badan.
Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagte ee gobolka J/hoose Burhaan Max’uud Xasan (Kukuuyu) ayaa sheegay in ciyaartan ay tahay mid ay kusoo dhaweynayaan xubnaha cusub ee golaha wasiirada maamulka Jubba ee dhawaan lagu dhawaaqay, wuxuuna sheegay in ay ku tartami donaan kooxo kala matali doona shanta xaafadood ee ay ka koobantahay magaalada Kismaayo.
Afhayeenka maamulka Jubba C/naasir Seeraar Maax ayaa isna goobta ka hadlay, waxa uuna ku booriyay dhalinyarada isboortiga in ay ka shaqeeyaan nabadda iyo isdhexgalka bulshada, wuxuuna xusay in ay soo dhaweynayaan tartamada caynkan oo kale ah.
Dhamaan masuuliyiintii goobta ka hadashay ayaa u hambalyeeyay xiriirka kubadda cagta ee gobolka J/hoose, oo ay ku amaaneen horumarka uu gaarsiiyay isboortiga gobolka.
Ugu danbeyntii waxaa goobta ka hadlay wasiirka arimaha gudaha iyo amniga ee maamulka Jubba Max’ed Faarax Warsame Darwiish, waxa uuna sheegay in ay soo dhaweynayaan tartanka lagu maamuusayo golaha cusub ee wasiirada, wuxuuna ballan qaaday in ay caawin doonaan isboortiga gobolka.